Heshiiskii SAS wuxuu halis ku yahay nidaamka wada-hadal ee shaqaalaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heshiiskii SAS wuxuu halis ku yahay nidaamka wada-hadal ee shaqaalaha
La cusbooneeyay tisdag 20 november 2012 kl 11.36
La daabacay tisdag 20 november 2012 kl 10.36
Heshiiskii shalay ey qalinka ku wada duugeen ururrada shaqaalaha iyo shirkadda SAS oo wax u dhimay xaalad-hoowleedkii shaqaalaha shirkadda ayaa noqonaya mid u dhacay si aan hore looga baran nidaamka wada-hadal ee ururrada shaqaalaha iyo shaqa-bixiyeyaasha ee suuqa shaqada.
Caqabad laga welwelo ee middaa la xiriirta waxaa noqon karta habka degdegga amarka ah ee wada-hadalku ku qabsoomay oo u muuqda mid sii fidaya, sida ay sheegtay Jennie Nilsson, af-hayeenka dhanka siyaasadda manaafacaadka ee xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga.
Halka uu wasiirka dhaqaalaha ee suuqa shaqada Peter Norman, sheegay in ciddii filaysay in wada-hadalkani qaato muddo dheer aanay ahayn cid la socota xaalad-hoowleedka shirkadaha duulimaadyada.
- Sidaa ayay marmar noqotaa xaaladda la xiriirta shirkadaha duulimaadyada, maadaama dakhliga shirkadaha duulimaadyada uu badankood ka yimaado dhaqaalaha laga helo tigidhada la iibsado. Waana mid ay joogsadaan iibinta tigidhadu inta lagu jiro xaaladda wada-hadal, loona baahan yahay in si dhakhsiya loo dhameeyo, in la dedejiyo, sida uu sheegay.
Dhaleeceeynta la idiin soo jeediyey ayaa la xiriirta xilliga oo gaabnaa, isla-markaana laga tallaabsadey habkii wada-hadal ee suuqa shaqada lagu yaqiin. Sidee u aragtaa middaa?
- Waan fahmi karaa cidda u aragta in xilligu gaabnaa. Waxaase dhici karta in aan la fahansaneyn sida ey ku howl-galaan shirkadaha duulimaadyada iyo habka loo miisaaniyad geliyo, sida uu sheegay Peter Norman.
Xubnaha ururrada shaqaalaha ayaa ka muujinayey fikrrado ah in xaaladda wada-hadal ee shirkadda SAS iyo ururrada shaqaalaha shirkadaasi aaney u dhicin sidii looga bartay nidaamka wada-hadal ee garabyada suuqa shaqada. Waana mid saameeyn ku yeelan karta wax ka bedelkeeda.
Jennie Nilsson, ayaa qabta inay wanaagsan tahay in heshiis guud la wada gaaray, hase yeeshee ka welwelsan inuu faafo habkii wax u dhaceen ee degdegga ahaa.
- Xaqiiqdii waxaa jirta welwel laga qabi karo middaa. Waase su'aal ka ballaaran sida iminka wax u dhaceen. Goolka siyaasiyiintu ma ahan iney gacanta la galaan arrimmaha wada-xaajoodka, waxayse tahay iney siiyaan suurtagallo isku mid ah garabyada wada xaajooneya. Waana middaa tana aan ka bixiney dhaleeceeynta, iyo in suurtagalka ururrada shaqaaluhu hoos u dhacay, sida ay sheegtay Jennie Nilsson.
Dhanka kale dhaleeceeymaha ka yimid dhanka ururrada shaqaalaha ayaa sheegey in loo baahnaa in maadaama dawladdu tahay mulkiilaha ugu wayn ee shirkadda SAS looga baahnaa sidii ey tusaale ugu noqon lahayd habka wada-xaajood ee garabyada suuqa shaqada ee dalkanik u caanka yahay iyo in wakhti dheeriya la helo. Kuwan ayaa ka mid ahaa ereyadii gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee TCO Eva Nordmark, mar ay u warantay shalayto laanta wararka ee Ekot.
- Waxaa loo qabtay digniin kama dambays ah, isla-markaanna ahaa wakhti gaaban, iyada oo laga doonayey in ururrada shaqaaluhuna qalinka un ku duugaan, mana ahan wax looga bartay nidaamka wada-hadal ee garabyada suuqa shaqada.
Wasiirka dhaqaalaha ee suuqa shaqada Peter Norman, ayaa sheegay in xaaladda shirkadda SAS ahayd mid khaas ah ee aan loo barbar-dhigi karin kuwo kale.
- Waxay ila tahay in xaaladda shirkadda SAS tahay mid khaas ah, hase yeeshee sida caadiga ah waa howl ka dhaxeeysa labada garab ee suuqa shaqada iyo sidii ey go'aan guud uga wada gaari lahaayeen. Mar labaad waxaan oran karaa in xaaladda SAS haddii sida ay u dhacday mid ka duwan loo maareeyn lahaa waxay hor-seedi lahayd busaarad iyo shaqaale badan ey hoowlahooda ku waayaan.
Marka waxaad aaminsan tahay in dawladdu raali ka tahay in mushaarooyinka shaqaalaha la dhimo? - Waxaan keliya oo aan dooneyaa inaan halka ka caddeeyo in xaaladdu noqon lahayd haddii kale mid hor-seedda shaqa la'aan baahsan, iyo caqabad dhanka duulimaadyada ee dalka gudihiisa, sida uu sheegay Peter Norman.